Fampisehoana sy famoahana raki-kira :: Hanolotra ny “Zara-kanto” ho an’ny mpifankatia i Nate Tex • AoRaha
Fampisehoana sy famoahana raki-kira Hanolotra ny “Zara-kanto” ho an’ny mpifankatia i Nate Tex
Ao anatin’ny fanamarihana ny fetin’ny mpifankatia no hanatontosan’i Nate Tex fampisehoana lehibe etsy amin’ny CCEsca Antanimena, amin’ny alahady 16 febroary 2020. Amin’io fotoana io no hanolorany ny “Zara-kanto”, rakikirany voalohany. Hiavaka ny lanonana satria hozarain’i Nate Tex ao avokoa ireo hira roa ambin’ny folo noraketiny ao anatin’ny “Zara-kanto”.
Anisan’ny vazo nampisongadina sy nampitombo ny mpankafy an’ity mpanakanto ity, ohatra, ny « Tsy afaka », « Tsara tso-drano » ary ny « Mahatalanjona ». Eo koa ireo nivoaka faramparany izay nisarika avy hatrany ny mpihaino, toy ny « Pejy faharoa »…“Manomana ny kanto sy ny tsara indrindra izahay mpanakanto sy ny mpikarakara mba hanomezana fahafaham-po ny mpijery”, hoy i Nate Tex.
Mpanakanto tanora kanefa efa nilomano an-taonany maro tao anatin’ny zavakanto i Nate Tex. Maroafitsoka ny tovolahy, satria ankoatra ny fahaizana mihira, dia mahafehy zavamaneno maromaro izy ary mpisehatra eo amin’ny tontolon’ny teatra ihany koa. Anisan’ny lohahevitra voiziny ny hoe “zara kanto”. Mampitongilana ny sofina avokoa rehefa safoin’ny angolam-peon’ity mpanakanto ity.
Tsy ny tanora ihany no babon’ny hiran’i Nate Tex, fa voasarika avokoa ny sokajin-taona rehetra, rehefa mihaino ny mozikany. Tonga ny fotoana hizarany ny kantony amina sehatra lehibe, valo taona taorian’ny fifaninanan-kira nampisongadina azy sy fito taona taorian’ny nivoahan’ny “Tsiahy”, hirany voalohany.
Fahampahafantarana raki-kira :: Tsy nandiso fanantenana ny sehon’i Imiangaly tetsy Analakely
Fanadinoana ny kanto taloha :: Tebahan’ny tarika Solika fa difotry ny fanatontoloana ny mozika tranainy